ICandelo leKhonkco leKhonkco leKhonkco China Manufacturer
Inkcazo:Iphepha leNtsimbi yeKhonkco yeKhonkco ye-Sheet Metal,Gqibezela Umtya weCoil,Umatshini wokungenisa izixhobo u-Uncoiler Straightener
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > ICandelo leKhonkco leKhonkco leKhonkco
ICandelo leKhonkco leKhonkco leKhonkco
Imigca yokuCoca i-Coil Lines yenzelwe ngokukodwa ukuphatha i-coil stock kwindawo yokugcina inyawo. Umtya weCrafact Coil ubandakanya i-uncoiler engasebenzisi moto, i-servo elawulwa ngokuthe ngqo / isondli kunye nemoto yokulayisha i-coil.
Ukulayisha i-coil kuhamba ngokuncedisa ukulayisha iikhoyili kwi-mandrel yeenxalenye zeedoiler.
Umatshini / i-decoiler eneemoto ngumatshini ophatha izixhobo obekwe ekuqaleni komgaqo wenkqubo osetyenziselwa ukubamba kunye nokuhlawula ngokukhuselekileyo okanye ukhulula i-strip yentsimbi.Ungasuswa kwi-coil yokuthumela umtya wentsimbi ukuze uqhubekiswe kwi-servo elawulwa ngqo i-ngqoener / feeder.
Umtya weCompact Coil Line oboniswe ngentla ubandakanya ukukhutshwa komqhubi wesithuthi esiqhutywa ngesantya esiphezulu sokukhuphela iirolithi eziphezulu.
Lo mgaqo wecoil odibeneyo ubonelela ngokulayisha izinto zekhoyili, ukungasebenzi, ukuhambisa ngokuthe ngqo kunye nokondla ngelixa ufuna indawo encinci yomgangatho. Kuba ikhoyili ibekwe ngaphezulu komqeshisi kunye neendlela zokondla kwaye izinto zilungelelaniswe ekungeneni komatshini wokushicilela, ukusetyenziswa komgodi oxhaphaxhapha okubonelela ngezinto zokwehlisa kuya kuba yimfuneko. Ubude bomgca bufutshane kwaye umtya-kunye namaxesha okuphinda ancitshiswe ngokucacileyo.
Umgca wecompact unezakhono ezifanayo ezifanayo kunye nomgca oqhelekileyo kodwa uhlala kwindawo encinci yomgangatho kwaye, rhoqo, ngokusebenza okulula. Nokuba ubukhulu bayo obuncinci-bungaphantsi kwesiqingatha sobukhulu bomgca oqhelekileyo-iyakwazi ukuphatha izixhobo ezinqinileyo nezomeleleyo. Ezi sept-space savers zinokuqhubekeka iikhoyili ziye kuthi ga kwiitoni ezingama-20 ububanzi buye kuthi ga kwi-1800mm kunye nobunzima phakathi kwe-0.6-6.0mm.
Umtya weCoil Coact unokunceda ekunciphiseni ukushiyeka kwezinto kunye nokunciphisa ixesha lokuphumla. Njengoko i-coil yezinto ezibonakalayo iyancitshiswa ngexesha lokusebenza, iseti yekhoyili yanda njengoko isentimitha yangaphandle iyancipha. Olutshintsho kwiseti yekhoyili inokufuna ukungena okunzulu kwe-roll ukuze kuveliswe indawo eyamkelekileyo yomgangatho. Icandelo le-straightener libekwe ngqo phambi komshicileli. Ke ngoko, uhlengahlengiso kwi-straightener luphucula umgangatho wenxalenye ephantse yanciphise iijams ezibonakalayo kunye neziqwengana. Isibonisi-skrini esibonakalayo kunye nencwadana yokuhambisa ngentambo kunye nencwadana yolondolozo kunye nokuxilongwa kwenkqubo zonke ziyafumaneka kuthotho lwakho kwisikrini sokudibanisa esidibeneyo.
Ke ngokubanzi, Umda weCompact Coil Line awasebenzisi nje kuphela indawo ngokufanelekileyo, bakwabalulekile ekunciphiseni amazinga okuqhekeka kunye nokuphucula iinxalenye kunye nokusebenza kwesixhobo ngokubanzi.
Ezona Nxalenye ziphambili zeeCact Coil feed Lines ezifumaneka ngezantsi:
I-MAC4 iCompact Coil Feed Lines isebenza kumzi mveliso wabathengi bethu.
Imigca yokuCoca i-Coil eCons lokwenza umgca wokutya okwenziwe nge-bracket coil sheet.
Lo mshini ng worki kwelinye mveliso umxhasi wethu, zenza U uhlobo iindawo kunye IiBhalbhu Ikhoyili Lines Feed.
Iphepha leNtsimbi yeKhonkco yeKhonkco ye-Sheet Metal Gqibezela Umtya weCoil Umatshini wokungenisa izixhobo u-Uncoiler Straightener ICandelo leKhonkco leKhonkco leKhonkco I-Uncoiler kunye ne-Straightener ye-Sheet Metal Iphepha lesibonelelo 3 kwi-1 Ukuqhubekeka kwensimbi ye-Metal iron Izixhobo zeMetch Sheet zaseMelika